खेलमा सधै जित्नु पर्छ भन्ने छैन – योहान कालिन - Khelpati
खेलमा सधै जित्नु पर्छ भन्ने छैन – योहान कालिन
मगलवार, भदौ ३, २०७६ शाम्भब ढकाल
काठमाडौं । नेपाली फुटबल कुन बाटोतर्फ अग्रसर भईरहेको छ ? धेरैको प्रश्न छ । ठ्याक्कै उत्तर कोहीसंग छैन । यो सहजै आउने उत्तर पनि हैन । राम्रो कस्तोलाई भन्ने ? सर्वमान्य मापदण्ड पनि त छैन, न त नराम्रो भन्नलाई ठोस आधार पनि छ ।
तर एउटा कुरा भने पक्का छ, नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा हासिल गर्ने नतिजाले धेरैले नेपाली फुटबलको दिशा र गतिको मुल्याङ्कन गर्नेछन् ।
फुटबलको आमुल परिवर्तनको दाबी सहित नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय (एन्फा)मा नयाँ नेतृत्व आएको करिब डेढ बर्ष बितेको छ । धेरैले भन्छन्, खोई त परिवर्तन ?
त्यसैले एन्फाको वर्तमान नेतृत्व दबाबमा छ । त्यसैले सबै भन्दा बढी फुटबल टिमबाट नतिजा एन्फाको वर्तमान नेतृत्वलाई चाहिएको छ । यसका लागि उसले क्लब फुटलका गतिविधि ठप्प पारेर सबै ध्यान विश्वकप छनोटको दोस्रो चरणमा लगाएको छ ।
नेपालले अब विश्वकप छनोटको दोस्रो चरण खेल्दैछ । अर्थात आफु भन्दा वरियतामा माथि रहेका देशसंग होम एण्ड अवेका आधारमा छनोट प्रतियोगिता खेल्नेछ ।
फुटबल संघलाई यतिबेला फुटबल टिमबाट राम्रो नतिजा चाहिएको छ । एन्फाले त्यसको जिम्मेवारी स्विडेनका प्रशिक्षक योहान कालिनलाई दिएको छ । त्यसैले कालिन समेत अघि अघि दबाब महशुश गर्छन् ।
फिटनेसमा ध्यान नदिने खेलाडीलाई उनी टिम बाहिरै राख्दिन्छन् । भर्खरै मात्र कप्तान विराज महर्जन टिम बाहिर परे । उनी यस्तै छन्, उनको स्वभाव र शैली यस्तै छ । फुटबल खेल्न फिटनेस पहिलो शर्त रहेको उनी मान्छन् । स्पष्ट बोल्न रुचाउने स्विडेनका प्रशिक्षकले विश्वकप छनोटको आसन्न प्रतियोगिताको तयारी कसरी गरेका छन् ।
खेलपाटीका वरिष्ठ संवाददाता दिपेश तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय फुटबल टिमका तीनै मुख्य प्रशिक्षक कालिनसंग कुराकानी गरेका छन् ।
विश्वकपको तयारी कस्तो छ ?
तयारी राम्रो छ । हरेक दिन खेलाडीले कडा मेहनत गरेका छन् ।
तपाईले भर्खर कप्तानलाई टिम बाहिर राख्नु भएको छ । के तपाई टिममा पर्न हरेक खेलाडी फिट हुनु जरुरी छ भन्ने सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
खेलाडीको लागि फिटनेस निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । समग्रमा हेर्ने भनेको मैदानमा खेलाडीको प्रर्दशन हो । फिटनेस छैन भने खेलाडीले प्रर्दशन गर्न सक्दैन । सबैलाई थाहा छ, विराज एकदम राम्रो खेलाडी हो । हामीलाई अझ उत्कृष्ट मध्यबाट उत्कृष्ट खेलाडी चाहिएको छ ।
यसको अर्थ बिराजले विश्वकप छनोटको खेल खेल्ने छैनन् ?
सबै खेलाडीलाई मौका छ । टिममा भएका खेलाडीले मात्र हैन, बाहिर भएका खेलाडीले समेत खेल्न सक्छन । तर अन्तराष्ट्रिय खेल खेल्न निकै कठिन हुने गर्छ । राष्ट्रिय टिम हो, खेलाडी आउने जाने भैरहन्छ । हेरौ भविष्यमा के हुन्छ ।
तपाईको नयाँ कप्तान को हो ?
थाहा छैन, हेरौ को हुन्छ ?
तपाईसंग कप्तानको सम्भाबना बोकेका खेलाडीको सुची होला नि ?
हुन सक्छ । छ होला । (हाँस्दै)
नाम भन्न मिल्छ ?
महत्वपूर्ण खेलाडी किरण, रोहित मलेसियाको क्लबविरुद्वको मैत्रीपुर्ण खेलमा छैनन् । यसले नेपाली टिममा अनुभवको कमी खड्किएला ?
हेरौ के हुन्छ । उनीहरु निकै अनुभबी खेलाडी हुन् तर उनीहरु छैनन् । भएको भए खेलमा घाइते हुन सक्थे । तर यो फिफाको खेल हैन । त्यसैले नयाँ खेलाडीलाई मौका हुनेछ । सधैं तपाईसंग बेष्ट टिम हुँदैन ।
यो तपाइको लागि परिक्षा हो । मुख्य खेलाडी नहुँदा के तपाई खुसी हुनुहुन्छ ?
यो सामान्य कुरा हो । अहिले बिमल घर्ति मगर उपलब्ध छन् । यो फिफाको तालिका हैन । र राष्ट्रिय टिममा आउने अन्य खेलाडीको लागि मौका हो ।
नेपाली टिम सम्हालेको ६ महिना पुगिसकेको छ । हामी अझै सकारात्मक नतिजाको प्रतिक्षामा छौं । उत्कृष्ट नतिजाका लागि अझै कति समय कुर्नु पर्छ ?
यदी सुक्ष्म तरिकाले हेर्ने हो भने हामीले २ महत्वपुर्ण खेल खेलेका छौं । एकमा बराबरी र एकमा पेनाल्टी दिएर हारेका छौ ।
करिब ९ महिना अघि हाम्रा प्रतिद्वन्दी रहेका तीनै टिमले युएई, जोर्डन, इरान जस्ता टिमलाई हराएका थिए । यसैबाट हाम्रो सुधार थाहा हुन्छ । सधै खेलमा जित्नु पर्छ भन्ने छैन ।
मलेसियाको बरियतामा हेर्ने हो भने धेरै माथि छैन । तर मलेसियाका खेलाडीले रोहितले जस्तै राम्रो लिग खेल्दै आएका छन् । उनीहरुसंग यत्तिको प्रदर्शन राम्रोनै हो भन्ने लाग्छ ।
तर नेपालले गोल र जितका लागि निकै संघर्ष गरिरहेको छ ?
के हामीले तल्लो स्तरको टिमसंग खेल्नु पर्ने थियो ? तर राम्रो टिम जसले विश्वकपमा खेलेको टिमलाई पराजित गरेको छ । त्यस्तो टिमसंग खेल्दा मानिसहरु किन गोल गर्न सकेनौ भनेर सोध्छन् । तर हामीले कुन स्तरको टिमसंग खेलेका छौं भन्ने भुल्नु भएन ।
के हामी विश्वकप छनोटको अर्को चरणमा पुग्छौ ?
पहिले हरेक खेलको प्रदर्शन हर्नुहोस । हामीले १४ अंक प्राप्त गर्छौं भन्नेले पनि कुनै अर्थ राख्दैन । उनीहरु पक्कै हामीमाथि दबाब बनाउने छन् ।
मलाई लाग्छ, हामीले पनि राम्रो नतिजा ल्याउने छौं । यसको पुष्टि पनि गरेका छौ । इजिप्टलाई झन्डै हराएको टिमसंग हामीले अवे खेलमा त्यत्तिको चुनौती दिनु मेरो बिचारमा राम्रो प्रदर्शन हो ।
विश्वकप छनोटमा तपाईको मुख्य चुनौती के हो ?
हामीले निकै बलियो टिमसंग खेल्नु पर्ने छ । प्रिमियर लिगको आधार भएका खेलाडी (अस्ट्रेलिया)संग खेल्नु पर्ने छ ।
सुरुवातमै अवे खेल खेल्नु पर्ने छ, जुन हामीलाई सजिलो पक्कै हुने छैन । मलाई लाग्छ यस्तो पहिले कहिल्यै भएको छैन । खेलाडीले कडा मेहनत गरेका छन् । उनीहरु साच्चिकै खेलको विकास गर्न चाहान्छन् ।
पहिला मलेसियन टिमसंग राम्रो खेल्नेछौ अनि अरु टिमबारे सोच्नेछौ । सबैले ठुलो अपेक्षा गरेका छन्, तर हामीले आफ्नो स्तर बिर्सनु हुदैन ।
तपाईले हरेर खेलमा फरक खेलाडी उतार्नुभएको छ । कुनै सेट टिम छैन । के कुवेतविरुद्व तपाईसंग गतिलो टिम छ ?
पक्कै पनि हामीसंग योजना छ ।
तपाईसंग प्लेइङ ११ को योजना छ त ?
छैन । तर, तपाईसंग केही आइडिया त हुनु पर्छ । तर, पुरै सेट ११ भने पक्कै हुनुहुन्न् ।